Tapaka matetika ny herinaratra… : vao mainka niakatra ny faktioran-jiro any Toamasina | NewsMada
Tapaka matetika ny herinaratra… : vao mainka niakatra ny faktioran-jiro any Toamasina
Saika ahitana fiakarany isam-bolana ny ankamaroan’ny faktioran’ny herinaratra isan-tokatrano ho an’ i Toamasina manokana. Fantatra nandritra ny fanadihadiana natao tamina tokantrano maromaro, araka ny faktioran’izy ireo izany, tetsy amin’ny foiben-toeran’ny Jirama Ampasimazava , nanomboka ny talata, hatramin’ny zoma teo.
Saika mitovy avokoa ny nambaran’ireo mpanjifa rehetra nanaovana ny fanadihadiana: adiny 8 hatramin’ny 12 monja anatin’ny 24 ora no mandeha ny herinaratra nanomboka ny volana aogositra lasa teo. Izany hoe, tsy nisy fotoana mihitsy nisitraka ny herinaratra 24 ora tsy niato ny mponina nandritra ny volana maro.
Efa fahavoazana niainan’ny mponina an-taony maro iny, ao Toamasina. Mbola fahavoazana hafa anefa ny tsapan’izy ireo, satria tsy mihena fa vao mainka mitombo ny vola aloa amin’ny faktioran-jiro isam-bolana. “Raha nanodidina ny 40.000 Ar ny fandaniana nataonay tamin’ny herinanratra nandritra ny taona maro teo aloha, niakatra maherin’ny 52.000 Ar izany nanomboka ny volana aogositra teo. Nandalo ny 70.500 Ar mahery ny volana septambra ary takafatra 82.800 Ar farany teo. Tsy nisy niova ny fitaovana hampiasanay herinaratra ao an-tokantrano. Vao mainka nihena aza, satria may ny fahitalavitra sy ny vata fampangatsiahana… Manginy fotsiny io fahatapahan-jiro mihoatra ny rariny io…” hoy ny nambaran’ny mpanjifa iray.
Mitaraina ny orinasan-tserasera
Samy mizaka ny fatiantoka amin’ny fahatapahan-jiro lava ny orinasa rehetra ao Toamasina. Manantombo amin’izany fatiantoka izany ireo orinasan-tserasera, noho ny fahasimban’ny fitaovana toa ny “émmeteur”, ankoatra ny fahitalavitra sy ny fampitan’onjam-peo isan-karazany.
Lasa zezika nampirongatra ny tsy fandriampahalemana eto Toamasina ihany koa ny fahatapahan’ny herinaratra lavareny, satria dia nisy fiara valo vaky fitatra, vehivavy telo voaendaka, moto roa voaroba ny alin’ny alakamisy 3 novambra teo fotsiny. Tsy nifanalavitra anefa ireo tranga ireo fa teo amin’ny sampanan-dalana eo Mangarivotra hatreny amin’ny trano fandihizana roa mifanila amin’ny bazarin’Ankirihiry may.
Tsy handrenesam-peo mba hitondra fanazavana ara-teknika hatreto, ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny Jirama eto Toamasina. Manampy trotraka izany ny fahanteran’ny fotodrafitrasan’ny jiro sy rano…
Sajo/ Zo ny Aina